मेट्रोभित्र अचानक अन्डरवियरमा युवती पुगेपछि…(फोटो फिचर सहित) | EuropeNepal.Net
00Europe Nepal Tuesday, January 13, 2015
London commuters strip for 'No Pants On The Tube Day'
सोच्नुस त यदि तपाइँ मेट्रो ट्रेनमा यात्रा गरिरहनु भएको छ र त्याहाँ अचानक तपाइँको बिचमा कुनै युवती पाइन्ट बिना प्रवेश गरिन भने तपाइँलाइ कस्तो लाग्दछ ? अचम्म नमान्नुस, यस्तो दृष्य आजकल मेक्सिको, न्यूयोर्क, वाशिंगटन सहित कयौं शहरहरूमा खुलेआम देख्न पाइन्छ । बास्तबमा मेक्सिकोमा हिजोआज ‘नो पेन्ट सबवे राइड’ मनाइँदैछ, जस अन्तर्गत मानिसहरू बिना प्यान्ट मेट्रोमा यात्रा गरिरहेका छन ।
The No Pants Subway Ride is an annual event staged across major cities of the World every January. The mission started asasmall prank with seven guys and has grown into an international celebration of silliness, with dozens of cities around the world participating each year.
‘नो प्यान्ट सबवे राइड’ का आयोजकहरूका अनुसार यो आयोजना संसारका कयौं शहरहरूमा मनाउने गरिन्छ । यस कार्यक्रममा भाग लिनका लागी मानिसहरूलाइ मेट्रोमा बिना प्यान्ट यात्रा गर्नुपर्दछ ।
यद्दपी, जो मानिस यसमा भाग लिँदैनन, उनीहरूका लागी भने यो सबै निकै रमाइलो हुने गर्दछ । आफ्नो बिचमा अन्डरवियरमात्र लगाएका युवा युवतीहरू देखेर उनीहरू पहिले त अचम्ममा पार्दछन, त्यसपछि मरिमरि हास्न थाल्दछन । जब निकै बेर पछि यस कुराको चाल उनीहरूले पाउँदछन ।
यस क्रममा केही मानिसहरू यस्ता पनि हुन्छन, जो उनीहरूको बिचमानै ट्रेनमा प्यान्ट फुकालेर यसमा सहभागी हुने गर्दछन । युवा युवतीहरूका बिचमा यो कार्यक्रम निकै लोकपृय भैरहेको पाइन्छ । निकै चिसो ठण्डीका बेलामा पनि मानिसहरू पाइन्ट बिना घुमेको देख्दा मानिसहरू अचम्म मानेर हेर्ने गर्दछन ।
हरेक बर्षको १२ जनावरीका दिन अमेरिका सहित संसारका बिभिन्न भागहरूमा ‘नो प्यान्ट्स सबवे राइड डे’ सेलिब्रेट गरिन्छ । यसको शुरुवात सन २००२ मा ‘इभप्रोभ’ नामको चर्चित थिएटर ग्रुपले गरेको थियो ।
यस ग्रुपका सात जना सदस्यहरूले पहिलो पटक न्यूयोर्कमा ‘नो प्यान्ट्स सबवे राइड डे’ मनाएका थिए, जुन अहिले संसारभर निकै प्रसिद्ध भैसकेको छ ।
सन २००६ मा न्यूयोर्कमा १५० जना मानिसहरूले यसरी यात्रा गरेका थिए । यस क्रममा आठ जनालाइ भने अव्यवस्था फैलाएको आरोपमा गिरफ्तार पनि गरिएको थियो ।
यद्दपी, पछि उनीहरूलाइ छोडिएको थियो । यस इभेन्टमा संसारका २५ भन्दा धेरै देशहरूका ६० शहरहरूमा यो कार्यक्रम मनाइन्छ । ‘नो प्यान्ट्स सबवे राइड डे’ अन्तरगत प्यासेन्जरहरू बिना प्यान्ट लगाएर भिन्न भिन्न स्‍टेशनहरूबाट मेट्रोमा चढ्दछन ।
इभेन्टमा सहभागी हुने मानिसहरू प्यान्ट बाहेक सबै लुगा भने लगाउँदछन ।
नो प्यान्ट्स सबवे राइड डे’ अन्तर्गत सन २०१४ मा अमेरिका, स्‍पेन, चीन र लण्डनमा मानिसहरूले एक दिन बिना प्यान्ट्स मात्र अन्डरवियर लगाएर बिताएका थिए ।
यो बर्ष पनि अमेरिका समेत संसारका बिभिन्न देशहरूमा ‘नो प्यान्ट्स सबवे राइड डे’ सेलिब्रेट गरिँदैछ ।
EuropeNepal.Net: मेट्रोभित्र अचानक अन्डरवियरमा युवती पुगेपछि…(फोटो फिचर सहित)